Manolotra topimaso vaovao momba an’i Iran ireo mpamokatra sarimihetsika an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Manolotra topimaso vaovao momba an'i Iran ireo mpamokatra sarimihetsika an-tserasera
Voadika ny 06 Jona 2019 3:39 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Português, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Desambra 2008)
Ny fotoana farany niresahanay momba ny Iran Inside Out dia vao nahavita lahatsary fampahafantarana ny mpitarika ny tetikasa, Shaghayegh Azimi mba hampilendalendana antsika ny zavatra hitranga:
Araka ny nohazavainy tamin'ny antsipiriany tao anatin'ny tomban‘ny tetikasa mizara roa , mikendry ny Iran Inside Out mba ho lasa orinasa miasa tontolo andro i Azimi hampielezana fanentanana sy hampahafantarana ny mombamomba ireo tanora Iraniana mpamokatra sarimihetsika amin'ny alàlan'ny fampidirana ny asany ho an'ny mpijery iraisam-pirenena. Niatrika sakana marobe ny tetikasa, saingy nahavita fandrosoana lehibe ihany koa izy tao anatin'ny enimbolana, anisan'izany ny tranonkala mahaliana sady hifanakalozana.
Nahavita namoaka lahatsary roa avy amin'ny mpamokatra horonantsary Hossein Rasti sy Hamid Najafirad ihany koa ny Iran Inside Out izay maneho ohatra ny herin'ny sarimihetsika mba hampitana ny fihetseham-pon'ny olombelona. Manome ny topimaso anatiny momba ny sehatra niavian'ny mozika metaly mavesatra ao Tehran ny sarimihetsika “Silent Screech” notontosain'i Najafirad .
Nahatonga an'i Hossein Rasti hisaintsainana lalina momba ny hoavin'ny zana-drahalahiny, Parsa, izay vao mainka mampandresy lahatra ny fanehoan-kevitra avy amin'ny filoha Amerikana Barack Obama momba an'i Iran. Moa ve hahita vanim-potoana hanjakan'ny fandriampahalemana sa ny fitomboan'ny fifandonana ny taranak'i Parsa?
Raha mitodika any amin'ny hoavy, nilaza i Azimi fa misy lahatsary hafa halefa afaka fotoana fohy ao amin'ny Iran Inside Out. Manantena ihany koa izy fa hanorina fiaraha-miasa amin'ny fetiben'ny sarimihetsika an-tserasera “Culture Unplugged” ary miaraka amin'ny sampana asa fanaovan-gazety, ny serasera, ary ny sarimihetsika ao amin'ny oniversite Iraniana ao an-toerana. Araho hatrany ny tranonkala Iran Inside Out hahitana votoaty mahafinaritra bebe kokoa.